२०७७, १ माघ बिहीवार १३:१७
कता जाँदैछ अर्थतन्त्र ? यस्ता छन् अर्थतन्त्रका सूचकहरु
काठमाडौं । कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पाँच (मङ्सिर) महिनासम्मको मुलुकको अर्थतन्त्र सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीवार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधवार तोलामा ९२ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीवार घटेर तोलामा ९२
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य बृद्धि भएको छ । मंगलवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार ८ सय रहेको थियो । त्यस्तै आज तोलामा १ सयले बृद्धि
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलवार (आज) सुनको मूल्य तोलामा ६ सयले बृद्धि भएको छ । सोमवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार २ सय रहेको थियो । आज मूल्य बृद्धि
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिष्ट्रेसन सेवा शुरु गरेको छ । अनलाइन रजिष्ट्रेसन सेवाको शुरुवातसँगै यसमा सहभागी हुन चाहनेले कोषको कार्यालयमा आउन नपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । स्मार्टफोनका लागि फाइभजीको उपयोगिताबारे कसैको शायदै दूई मत होला । तर, वाईफाई उपलब्ध हाम्रा घरमा यसको आवश्यकताका बारेमा कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? विस्तारै वाईफाई पुरानो प्रविधिका रुपमा
निरन्तर घट्दै सुनको मूल्य, आज कति छ तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले गिरावट आएको छ । साताको शुरुको दिन आइतवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९३ हजार रहेको थियो । भने आज मूल्यमा
सिद्धार्थ बैंकको ‘स्मार्ट टेलर’ सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । ग्राहकरुलाई डिजिटल प्रविधिको बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नयाँ सेवा ‘स्मार्ट टेलर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सुविधा सञ्चालन पश्चात् ग्राहकहरुले चेक वा एटिएम
एकैपटक २३ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कति छ तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा २ हजार ३ सयले कमि आएको छ । शुक्रवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९५ हजार ३०० रहेको थियो । त्यस्तै आज सुनको मूल्यमा
‘डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउण्ट’ अफरका विजेतालाई चेक हस्तान्तरण
काठमाडौं । डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउण्ट योजना अन्र्तगत ‘लाईभ लक्कि ड्र’ का भाग्यशाली विजेताले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । धादिङ थाक्रेका स्थानीय मनोज रिजाललाई डिशहोमका जेनरल म्यानेजर रमेश